Maalinta: Maarso 3, 2018
Iyadoo la siinayo gaadiid kale oo udhaxeeya Bursa iyo Uludağ, dariiqyada ayaa la hakiyey xaaladaha cimilada xun awgeed. 20 waa qiyaastii hal 8 sekibo sababtuna waa dabaysha oo magaalada ka soconeysa ilaa subaxnimadii hore. [More ...]
Waxaa la sheegaa in shirkadda iskaashiga Astaldi SpA iyo IC Yatırım Holding A.Ş ay la kulmeen maal-gashadeyaal ay ku jiraan shirkadaha Shiinaha iibka saamiyadooda ku yaal Buundada Yavuz Sultan Selim. Meheradda HT oo ka socota Bloomberg News [More ...]
Duqa Magaalada Samsun Metropolitan Yusuf Ziya Yilmaz berrito, 14.00 - 18.00 inta udhaxeysa awaamiirta, Samsunspor - Çaykur Rizespor ciyaarta taageerayaasha waxay bixin doonaan adeeg taraam bilaash ah. Ciyaaraha Toto 1. Xiriirka 25. in la ciyaaro usbuuca [More ...]
Ku soo bandhigida nidaamka kaarka aan lagaranaynin ee degmada Adana Metropolitan Municipal, Kentkart iyo MasterCard iskaashi 'ADVANTAGE FOR THE CITY HANAN' Kulan horudhac ah oo ku saabsan dalabka kaararka aan lala xiriirin ee Degmadda Adasa Magaalo Weyn, Kentkart iyo iskaashiga MasterCard [More ...]
Sharaxaadda Madaxweynaha Tuna C
Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna wuxuu sii wadaa wada tashiyada uu la leeyahay ururada degmada AK Party ka hor doorashooyinka maxalliga ee soo socda ee 2019. Gudoomiyaha Xisbiga AK Party Etimesgut Ebubekir Kipel iyo lasocoshada 40 [More ...]
Kuxigeenka Wasaaradda Dhaqaalaha Hüseyin Dilemre iyo wafdi la socda ayaa booqday Duqa Magaalada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz. Agenda ee booqashada [More ...]
Waxaanu ahaaneynaa xayeysiin filim ah
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınBishii Maarso ee majaladda Raillife, maqaalkiisii ​​cinwaankiisu ahaa "Garlarımız wuxuu noqday Filimka Plateau" ayaa la daabacay. Waa tan maqaalka Agaasimaha Guud ee TCDD ISA APAYDIN ​​Martigeliyay ilbaxnimo badan [More ...]
80 garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Maqaalka bishii Maarso ee joornaalka Raillife, Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay "X" Dhameystirka Boqolkiiba 80 ee garoonka diyaaradaha Istanbul ". Waraaqda ARSLAN EE KA SOO SAARAY WASIIRKA ISTANBUL Dhismaha Madaarka cusub ee Istanbul si xawli ayuu usocdaa. [More ...]